I-corona igadle kumgadli weJuventus - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-corona igadle kumgadli weJuventus
I-corona igadle kumgadli weJuventus
UDybala uthembisa ukulinqoba leli gciwane abuyele enkundleni
UPAULO Dybala weJuventus naye usebalwa nabane-corona e-Italy.
UMHLABA wonke usenkingeni njengoba kungenise ngamandla igciwane le-corona eselishiye kukhalwa ikakhulukazi emazweni ase-Europe nawase-Asia.
Nokho isililo sikhulu kakhulu ezweni i-Italy njengoba isibalo sabantu abafayo ngenxa yalolu bhubhane silokhu sinyuke ngamandla.
Ngendlela leli gciwane elingenise ngayo alikhethi ukuthi udumile kumbe uyahlupheka noma ungumdlali odumile, uma likuba-mba liyakubamba nje kungabi ndaba zalutho.
UPaulo Dybala (26) ongowokuzalwa e-Argentina ungomunye wabadlali beJuventus okuthola-kale ukuthi uhaqwe yileli gciwane kanye nentombi yakhe.
Nokho lo mdlali uthi abalandeli bakhe abangatatazeli ngoba uzoyinqoba le mpi.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi nginalo leli gciwane kodwa angizwa zinhlungu futhi anginazimpawu zokuthi selingibambile.
“Njengamanje ngizivalele ngedwa endlini kuze kube liyaphuma leli gciwane kumina.
“Ngiyacela kubantu ukuba babakhulekele abantu abanaleli gciwane ngoba liyingozi, sebephelile abantu lapha e-Italy ikakhulukazi abadala,” kusho lo mdlali.
Nakuba lo mdlali limbambile leli gciwane uthi uzobuya ngama-ndla ebholeni uma sekubuya imidlalo.
UDybala uzalelwe eLaguna Larga, eCordoba, e-Argentina.
Umkhulu wakhe uBoleslaw Dybala yena imvelaphi yakhe ngeyaseKrasniow, ePoland.
Umkhulu wakhe ubaleke kuleli lizwe ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili walibhekisa e-Argentina.
Amanye amalungu omndeni wakhe alibhekise eCanada.
Umndeni wakhe uphinde ube nobuzwe base-Italy ngenxa yokhokho bakhe abadabuka khona abebesebenzisa isibongo sakwaDa Messa.
UDybala naye unobuzwe base-Italy abuthole ngo-2012.
Ngenxa yemvelaphi yakhe lo mdlali ubenelungelo lokudlalela iqembu lesizwe lasePoland nelase-Italy kodwa wakhetha ukudlalela i-Argentina.
“Ngizizwa ngingowase-Argentina ngokuphelele ngoba ngizalelwe khona. Bekungeke kungijabulise ukudlalela iqembu lesizwe engingalizwa njengelami.
“Bengingeke nje ngikwazi ukucula iculo lesizwe engingalizwa emithanjeni yegazi lami,” kusho uDybala obizwe okokuqala eqenjini lesizwe lase-Argentina ngo-2012 kodwa wanqaba.
Lo mdlali uqale ukudlala ibhola emncane kakhulu egijima kwi-Instituto de Cordoba yase-Argentina. Ngenxa yokubona ukuthi unekhono elimangalisayo ube eseya e-Italy ngo-2012 wajoyina iPalermo engazange imoshe sikhathi yamufaka esikimini esikhulu esidlala kwiSerie B.
Ufike kuyona wagila izimanga wayisiza yanyukela kwi-Serie A ngo-2013/14.
Udlale isizini kwi-Seria A naleli qembu yabe isiqhamuka iJuventus ingqongqoza yamusayinisa nge-tshe le mali.
Selokhu efike kwiJuventus uyisilomo njengoba ethandwa ngabalandeli.
Usenqobe inqwaba yezinkomishi nayo njengoba esedlale kuyo imidlalo engaphezulu kuka-100.
Nokho ekuqaleni kwale sizini kuke kwaba namahlebezi okuthi angase ayishiye le kilabhu ngenxa yokuthi usebuye angalinikwa ijezi.
Ukufika kukaCristiano Ronaldo kwiJuventus kuthiwa yikhona okwenze wehlelwa nayifomu nje-ngoba engasanakwa kangako.
“Ukufika kukaRonaldo kungi-khulisile ngoba ngifunda okukhulu kuyena.
“Sinobudlelwano obuhle naye futhi uyangeluleka ngezinto okufanele ngizenze nokungafanele ngizenze enkundleni.
“Ngiyakuthokozela ukudlala eduze kwakhe kodwa ekugcineni uma ikilabhu ingasakudingi ayikho into osuke uzoyenza kufanele uhambe.
“Ngisakuthokozela ukuba lapha kwiJuventus kodwa ngeke ngenze lutho uma ingasangidingi,” kusho yena.
Previous articleThongathi engcupheni yokushiywa wumgadli
Next articleImpilo nemvelaphi kaC	redo Mutwa